Yakakosha pombi dzakateedzana fekitori - China Yakakosha pombi dzakateedzana Vagadziri, Vatengesi
HDPE gasi pombi yakasimba uye yakachengeteka, inonyanya kushandiswa mumaguta maginjiniya. Life Hupenyu hwakareba Kushandiswa kwakachengeteka kweanopfuura makore makumi mashanu. Lex kuchinjika Iyo PE pombi ine kukwirisa panguva yekumhanyisa inopfuura 500%. Icho hachizoputika pasi peshanduko dzakasiyana dzesuburface senge kudzikira kwepasi nekudengenyeka kwenyika, uye ine chengetedzo yepamusoro. Vakafugama nharaunda (R≥15D), hapana chikonzero chegokora majoini, iri nyore pakuvaka. ◎ Kudzivirira kushomeka Iyo yakaenzana yekuwedzera coefficient ye PE pombi ndeye 1.5X10-4mm / m ...
HDPE Marasha Pasi Pipe Pipe
Flame retardant / antistatic Iyo antistatic uye murazvo unodzora zvikamu zvepolyethylene pombi dzinoshandiswa mumigodhi yemarasha zvakagovaniswa zvakaenzana mumutumbi wepombi, saka antistatic uye murazvo unodzora mashandiro ekuratidzira haazokanganiswi neyakareba nguva yekushandisa. Iyo antistatic uye murazvo unodzora zvivakwa zvinoenderana nematanho emunyika uye inokodzera nzvimbo dzakananga uko dzinopfuta uye dzinoputika pasi pevhu. Yakareruka / yakapusa kuisa iyo density ye polyethylene mapaipi anoshandiswa muco ...
Mvura yepasi pehunhu yekutarisa uye akakosha epurasitiki mapaipi ematsime akadzika
Plastiki tsime pombi ine hunhu hwehuremu huremu, yakasimba ngura kuramba, kugadzikana kwakanaka, mutengo wakaderera, nezvimwe. Mumugodhi wemvura tsime munyika dzekunze, kunyanya munyika dzakabudirira, zvinopfuura makumi masere muzana epombi dzepurasitiki tsime dzinoshandiswa. Mamiriro ekusimudzira emangwana mumunda wematsime emvura kushandisa matsva ekugadzira matsime ekugadzirisa matambudziko ehurosi uye kuyera, kunyanya dambudziko re anticorrosion yematsime emvura munzvimbo dzine munyu mukuru. PVC-U epurasitiki mutopota ane ch ...